Saịtị iri kacha elu Russia | Koodu ego cha cha n'ịntanetị
Top 10 Russian cha cha Sites
(786 votes, nkezi: 4.00 si 5)
Loading ... Ịgba chaa chaa aghọwo otu n'ime nsogbu iwu kachasị mkpa maka ọchịchị Rọshịa kemgbe mmalite nke narị afọ 21st n'ihi ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke igwe oghere na ụlọ ịgba chaa chaa. Casinos malitere gbasaa na mba ahụ dum, nke kpatara nnukwu nchegbu maka ndị ọchịchị obodo, bụ ndị na-echegbu onwe ha maka ndị na-eto eto.
Flag of RussiaCurrently, ịgba chaa chaa na Russia bụ iwu na ọtụtụ mpaghara isiokwu ebe. A afọ ole na ole gara aga - na 2009 - ya a na-akpọsa dị ka iwu na-akwadoghị na ndị ọzọ nke mba n'ókèala dị ka akụkụ nke Russia si echesinụ mgbochi ịgba chaa chaa iwu.
Ndị isi obodo ahụ akwadoghị ọrụ ịgba chaa chaa na weebụ, nke ghọrọ ihe kpatara eji egbochi ndị na-egwu egwuregwu na ebe nrụọrụ weebụ poker na-enweghị ihe kpatara ya.
List of Top 10 New Russian Online cha cha Sites
History of Ịgba chaa chaa Regulation na Russia
Ụlọnga ịgba chaa chaa niile ka a machibidoro iwu na 1928 nakwa n'oge a tinyere Russia n'okpuru Soviet Rule. Nke a mere ruo mgbe ọ fọrọ nke nta ka njedebe nke 1980s, mgbe ụfọdụ iwu na-agbanwe site na mgbanwe. Na 1988, mba ahụ na-eme ka ígwè oghere dị na mpaghara ụfọdụ. A kwadoro ikikere ịgba chaa chaa na 1989.
Na oge n'etiti 1989 na 2002 ọ bụ a oge nke a nkọ mmụba nke ọnụ ọgụgụ nke cha cha-arụ ọrụ na ókèala nke Russia, na n'elu 50 ịgba chaa chaa ụlọ na-agba ọsọ na Moscow naanị. Nke a ụdị ntụrụndụ bịara ọzọ ọzọ na-ewu ewu n'etiti obodo ụmụ amaala, ma na mba iwu bụ ndị ogbenye, nke mere na mba Government buru ngwa ngwa jikoro aka ịchịkwa ọrụ.
Nke a dịruru ruo mgbe 2006, mgbe a iwu na iwu na ụdị nile nke online ịgba chaa chaa na mba ahụ nọ na-agafe na Russian Government. Tupu mgbe ahụ, obodo ahịa e nyere ohere kasị chaa chaa weebụsaịtị.
Na 2009, ịgba chaa chaa nwetara nkwado iwu na a ngụkọta nke anọ zones nke mba: Kaliningrad Oblas, Altai Krai, Primorsky Krai na Krasnador Krai. Na mbụ kere ruo afọ atọ mgbe e mesịrị. Na 2012, na online ịgba chaa chaa ban na mba e me otu nzọ ụkwụ n'ihu ekele a na-achị nke Ụlọikpe Kasị Elu nke Russia, nke kwuru na online ịgba chaa chaa na enye 'weebụsaịtị ga-egbochi na mba.
The Roskomnadzor - a ndepụta nke na-ekwu niile weebụsaịtị kwusara dị illegal site Russian Government - e mere n'ihu ọha mgbe e mesịrị na 2012. The ndepụta gụnyere ihe ọmụma zuru ezu banyere a ọnụ ọgụgụ nke ngalaba na-enwe site na mba na ịgba chaa chaa rụọ. Nke a mere ka ụfọdụ n'ime ndị kasị ibu aha na ndị ụlọ ọrụ ga-emechi ohere ha weebụsaịtị maka Russian ahịa, ma ndị ọzọ rụọ ka enye ha ọrụ ná mba ahụ.
E a ngụkọta mmachibido iwu n'elu ịgba chaa chaa azụ ke USSR, mgbe nke ịgba chaa chaa mgbochi ndị a bit tọpụ, karịsịa na ebe a na-ugboro ugboro gara njem nleta. Ihe ọtụtụ casinos na ịkụ nzọ ụlọ ndị e mere dị ruo mgbe ịgba chaa chaa wepụrụ mmachibido iwu ahụ site Government na August 1989 na mbụ egwu egwuregwu ebe ke Moscow e meghere.
Otú ọ dị, ogbenye iwu, nlekota na-achịkwa na ịgba chaa chaa na-eme na ókèala nke mba ghọrọ ihe mere ịgba chaa chaa malitere eme bukwanu nsogbu maka Government. Nke a mere ka oke mgbanwe nke Russian ịgba chaa chaa iwu 2009.
Ịgba chaa chaa na-eme nkịtị casinos e machibidoro na mba maka ọkara a afọ iri ugbu a.
Dị ka e kwuru n'elu, ịgba chaa chaa na Russia na-eze nkwado iwu na ọtụtụ mpaghara dị n'akụkụ ndị dịpụrụ adịpụ nke mba. Ndị a na mpaghara bụ: Kaliningrad Oblast, Azov-City (nke Rostov Oblast e ekwe si ndepụta), Altai Krai na Primorsky Krai.
A na-ewere Primorsky Krai n'ụzọ zuru okè ka a họpụtara ya iji nweta uru ahịa Asia. Ógbè ahụ dị nso na ókèala ndị China, nke ga-enye ndị ọrụ obodo ahụ ohere iji dọta nnukwu ụgbọ elu Asia na mpaghara ahụ.
E nwekwara-ezube maka a super cha cha nsogbu dị nso Vladivostok na a na-aiming na-adọta ndị ọzọ Player na ebe.
Na December 2014, ọ bịara doo anya na President Vladimir Putin nyere green ìhè amụba ọnụ ọgụgụ nke na mpaghara isiokwu ebe, nke rụpụtara n'ime tinyere Crimea na Sochi na ndepụta.
Online ịgba chaa chaa, na aka nke ọzọ, a n'ụzọ zuru ezu iwu na mba. The otu na-emetụta ndụ ịgba chaa chaa-eme na ike nke Russia n'ókèala. The mba iwu na-adịghị egosi n'ụzọ ọ bụla na e nwere ike ịbụ a mgbanwe ndị a iwu ọ bụla oge adịghị anya na n'ọdịnihu dị nso.
Ugbu a, ịgba chaa chaa na Russia kemgbe a shaky isiokwu, dị ka ya kpacharaghị, agụụ na-agụghị oké ekwu ịrị elu kpatara oké ịgba chaa chaa nsogbu n'etiti ndị obodo na karịsịa n'etiti tọrọ ndị mmadụ.
Na mba ahụ, Otú ọ dị, e nwere otu batrị gọọmenti etiti, nke bụ iwu. Ogbagba ahụ na-enye ndị ọrụ ohere ohere ịgba ụgwọ site na lotteries abụọ - Gosloto na Sportloto. E nwekwara mgbanwe ụfọdụ n'ahịa ịkụ nzọ ahịa, na mmejuputa ikikere pụrụ iche nke ndị ọrụ chọrọ.
Ịgba chaa chaa Regulation na ọchịchị na Russia
Ịgba chaa chaa iwu na RussiaCurrently, na Russian Government anamde isi ala ụkpụrụ nke niile ọrụ na-eme ihe ndị metụtara ịgba chaa chaa. E nwere a gọọmenti etiti Executive gị n'ụlọnga nke na-isiokwu ịrụ ụfọdụ ọrụ iji nyochaa ọkọlọtọ na iwu iwu mgbe ọ na-abịa na ịgba chaa chaa na nzukọ.
Ke adianade do, ndị ọzọ na gọọmenti etiti Executive ọchịchị nwere ụfọdụ competences metụtara na akara na oditi nke ndị dị otú ahụ na-eme. Ọtụtụ ndị ọchịchị na ozu nke constituent entities nke mba nwere nwekwara ikike ịrụ ọrụ nke Ịgba Cha Cha mpaghara management na ụkpụrụ.
Dị ka Russian iwu, ịgba chaa chaa na-eme nwere ike ndokwa site ụlọ ọrụ iwu kwadoro, nke na-aha na ozi ka iwu na usoro emejuputa atumatu oru site na Russian Federation. Ọ dịghị ụlọ ọrụ iwu kwadoro, nke na-metụtara ndị obodo ya, na mba constituent entities ma ọ bụ gọọmenti ime obodo na-nyere na ohere ndokwa ma jide ịgba chaa chaa ọrụ na arụmọrụ.
E nwere ihe anọ Ịgba Cha Cha zones guzobere ozi na iwu nke Russian Federation. Mgbe President Putin kwetara na-amụba ka ọnụ ọgụgụ nke pụrụ iche Ịgba Cha Cha zones, dị na-atụ anya ga-melite n'ime Altay, Kaliningrad na Primorie, nakwa dị ka ókè-ala n'etiti Krasnodar region na Rostov mpaghara.
The Government bụ na ha nwere ikike na ike na liquidate a egwu egwuregwu na mpaghara, nakwa dị ka ekwu ad mwube nke zones 'aha, ala ma ndị ọzọ e ji mara n'okpuru okwu nke nkwekọrịta ndị ọchịchị ozu na constituent entities.
The ugbu a mkpa ọchịchị na-isiokwu na izugbe amaka ọ bụla iche nke ịgba chaa chaa na-eme na ókèala nke Russia bụ Government na Ministry of Finance nke Russian Federation.
The Federal Tax Service nke mba na-nyere ụfọdụ ọrụ aha bookmaking rụọ, totalizators na ịkụ nzọ ihe. Ọ bụkwa maka ịlele teknuzu ọnọdụ nke ịgba chaa chaa na ngwá. Ụfọdụ kpọmkwem ibu ọrụ na-enye ụfọdụ ndị ọchịchị, mgbe ọ na-abịa na-achịkwa, nlekota na ụkpụrụ nke ikpeazụ ahụ n'ozuzu amaka.
The isi omebe iwu omume nke na-akọwa isi nke ịgba chaa chaa na Russia na-enye usoro iwu ngwọta maka ịgba chaa chaa ọrụ na-eme na mba bụ Federal Iwu nke December 29th, 2006 Mba 244-FZ.
Dị ka e kwuru n'elu, na ịgba chaa chaa Iwu na-akpọ nile di iche iche nke ịgba chaa chaa iwu na-akwadoghị, ma e wezụga n'ihi ụdị ndị na-usoro n'okpuru kpọmkwem usoro na ọnọdụ na karịsịa mere ịgba chaa chaa zones.
E nwekwara ọtụtụ ebutere iwu enactments na-enye mma nkọwa na nkọwa nke chọrọ na usoro emejuputa na Ggba chaa chaa Iwu. Agbanyeghị, iwu metụtara iwu lọtrị bụ nke dị iche. Lottries na-achịkwa Federal Iwu "On Lotteries" nke November 11, 2003 mba. 138-FZ.
Online Ịgba chaa chaa na Russia
Online Ịgba chaa chaa na RussiaConsidering n'ozuzu ala nke ịgba chaa chaa ụlọ ọrụ na Russia, online ịgba chaa chaa na-metụtara na-amụba nchegbu. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na online ịgba chaa chaa na Russia na-dị nnọọ ka kpamkpam emeso dị ka ala dabeere casinos eme. The web-dabeere na ịgba chaa chaa ọrụ na-ugbu a ifịk ifịk iwu.
Ihe kariri afo iri gara aga - na iwu nke iwu obodo na iwu 2006. Otú ọ dị, Poker na-anọgide na ebe ntụ ntụ n'ihi nkwurịta okwu ma ọ bụ nkà ma ọ bụ egwuregwu egwuregwu.
Mpaghara dabeere Player enwewo ike ịnweta esenidụt na enye 'weebụsaịtị, n'agbanyeghị eziokwu ahụ ISPs a jụrụ igbochi weebụsaịtị na na-metụtara ịgba chaa chaa.
0.1 List of Top 10 New Russian Online cha cha Sites
2.1 History of Ịgba chaa chaa Regulation na Russia
2.3 Ịgba chaa chaa Regulation na ọchịchị na Russia
2.4 Online Ịgba chaa chaa na Russia